यसरी हुन्छ त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा थेसिसको खरिद विक्री – Radio Miteree (Latest News)
फिचर • ब्लग
प्रमोद आचार्य खोज
आफ्नो नाम शिवराम गौतम बताउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय डीन कार्यालयका शाखा अधिकृत शिवशंकर गौतम विद्यार्थीलाई थेसिस बेच्ने काम गर्छन् । उनको अर्को काम पुराना थेसिस ‘स्वीकृत गर्न’ विश्वविद्यालयभित्र ‘सेटिङ’ मिलाउने पनि हो । हामीले उनलाई “समाजशास्त्रको थेसिस चाहियो, त्यो स्वीकृत पनि हुनुप¥यो” भन्यौं । उनले तुरुन्तै “आफूसँग पहिल्यैको थेसिस भएकोले १२ हजार रुपैयाँमा दिनसक्ने” र “त्यो स्वीकृतसमेत गराइदिने” बताए । उनले हाकाहाकी भने “कृष्ण भट्टचनलाई राखेर गराइदिन्छु । चिन्तै लिनुपर्दैन ।” ‘अरूलाई राख्न सकिंदैन ?’ भन्ने प्रश्नमा शाखा अधिकृत गौतमले भने, “जसलाई पनि भन्न सकिन्छ ।”
गौतम त्रिविकै पूर्वकर्मचारी तथा नयाँबजारस्थित युनिभर्सल फोटोकपी सञ्चालक जनक केसीसँग मिलेर यो ‘धन्दा’ चलाउँदा रहेछन् । ‘समाजशास्त्रको थेसिस मिलाउन सक्नुहुन्छ ?’ भन्दा केसीले भने “साइन्सबाहेक अरू सबै विषयको मिलाउन सक्छु । १६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।” किन यति महँगो भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने “थेसिस लेख्ने÷मिलाउनेलाई दिनुप¥यो । सरलाई दिनुप¥यो । फेरि सरले ‘डिपार्टमेन्ट’ मा पनि मिलाउनुपर्छ । लास्टमा दुईरतीन हजार गोजीमा पर्ने हो ।”
अरूका पुराना थेसिस तल–माथि पारेर विद्यार्थीलाई बेच्ने एकजना व्यक्ति हुन्, मनमोहन थापा । कसैलाई पाटन क्याम्पस त कसैलाई एशियन कलेज पढाउने व्यक्ति हुँ भन्ने थापा त्रिवि परिसरको ज्ञानकुञ्ज फोटोकपी र हिराबुक्स सेन्टरमार्फत काम गर्छन् । पहिल्यैदेखि ‘थेसिस कारोबार’ गर्दै आइरहेको बताउने उनी एउटा थेसिसको पन्ध्रहजार रुपैयाँ लिन्छन् । हामीसँगको कुराकानीमा उनले “व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास र राजनीतिशास्त्रका सरलाई ‘राम्ररी चिनेको’ भन्दै सजिलै थेसिस पास गर्न सकिने” बताए । उनले “ग्रामीण विकास विभागका लेक्चरर उमेशप्रसाद आचार्यलाई अनुरोध गरे पास गर्न सजिलो हुने” ठोकुवा गरे । उनले यस्तोसम्म दाबी गरे कि तीस हजार रुपैयाँ खर्च गरे व्यवस्थापन विभागको थेसिस विना प्रपोजल पास गर्न सकिन्छ । “म मिलाइदिन्छु टिचर” उनले भने “सही गर्नेले दश हजार लिन्छन् । लेख्नेले दशहजार । कर्मचारीलाई पनि दिनुपर्छ ।” उनले राजनीतिशास्त्र विभागका प्रा.डा. रामकुमार दाहाललाई मनाएर प्रपोजल नबुझाइकनै पनि थेसिस स्वीकृत गर्न सकिने बताए । मनमोहन थापाप्रति विश्वास गर्न भन्दै त्रिवि परिसरको ज्ञानकुञ्ज फोटोकपी पसले टुकानाथ शर्माले भने, “अहिलेसम्म सयौं थेसिस गरिसकेका मान्छे हुन् । चिन्ता लिनै पर्दैन । ढुक्क भए हुन्छ ।”
क्ष्ःन्)द्दण्ज्ञटण्ढण्द्द)ज्ञटद्दण्ण्ठएउटा उदाहरण हो, त्रिवि अन्तर्गतको ग्रामीण विकास विभागमा रहेको नेपालका बालश्रमिक सम्बन्धी थेसिस । यादव भट्टराई, बिन्दुकुमारी घर्तीक्षेत्री र मुनाकुमारी आचार्यको ‘डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर इन नेपाल’ थेसिसले सबैलाई हँसाउँछ । अनुसन्धान गरिएको भनिएको ठाउँको नाममा कसैले पुतलीसडक, कसैले ठमेल त कसैले गोंगबु भनेर लेख्ने बाहेक बाँकी विवरण एउटै छ ।
अर्को उदाहरण ग्रामीण विकास विभागका प्राध्यापकहरू डा. मंगला श्रेष्ठ र डा. उमाकान्त सिलवालले दुई विद्यार्थीका नामबाट बुझाइएको एउटै व्यहोराको थेसिस एकै वर्ष स्वीकृत गरेका छन् । पारस भण्डारीको नामको ‘रोल अफ रेमिट्यान्स इन दी रिडक्सन अफ रुरल पोभर्टी–अ केस स्टडी अफ मच्छेगाउँ भीडीसी अफ् काठमाडौं डिस्ट्रिक, नेपाल’ र तुलसीराम नेपालको नाममा रहेको ‘रोल अफ रेमिट्यान्स इन दी रिडक्सन अफ रुरल पोभर्टी–अ केस स्टडी अफ कर्मैया भीडीसी अफ सर्लाही डिस्ट्रिक, नेपाल’ शीर्षकको थेसिसमा सबैजसो विवरण एउटै छ । पारसले सन् २०१४ मा र तुलसीरामले सन २०१५ मा बुझाएका यी थेसिसकै भाषासँग जुनमाया घर्तिको नाममा रहेको अर्को थेसिसको भाषा पनि धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ, जसको सुपरभाइजर छन् प्रा.डा. चन्द्रलाल श्रेष्ठ । ग्रामीण विकास विभागबाटै स्वीकृत भएका थेसिसहरू हेर्दा रेमिट्यान्स, सोसल इन्क्लुजन र टुरिजम विषयका प्रायः थेसिसहरूको भाषा एउटाको अर्कोसँग मिल्दो छ ।क्ष्ःन्)द्दण्ज्ञटण्ढण्द्द)ज्ञटद्दज्ञछघ
समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्र विभाग पनि यो रोगबाट मुक्त छैनन् । वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको असर÷परिवर्तन, विभिन्न जातजातिमा आएको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन, सहभागिता र समावेशिता जस्ता विषयमाथि लेखिएका थेसिसहरूको भाषा र तथ्यांकसमेत धेरै मिल्छ । राजनीतिशास्त्र विभागमा बुझाइएका थेसिसमध्ये नेपालको संविधानसभामा महिला सहभागिता विषयमा लेखिएका दुईवटा थेसिस हुबहु भेटिए । बमबहादुर रावल र राजु कुँवरको नाममा रहेको एउटै शीर्षकको थेसिसका सुपरभाइजरहरू क्रमशः सिद्धिलक्ष्मी वैद्य र मनोहर पराजुली छन् ।
आंगिक क्याम्पस उही ताल
थेसिसको उत्पादन र किनबेचमा पुस्तक÷फोटोकपी पसलका व्यक्ति, विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्राध्यापकसम्मको मिलेमतो हुन्छ । विद्यार्थीहरूसँग आफैंले सम्पर्क राख्दा ‘लिक’ हुने डरले थेसिस लेख्ने÷बेच्नेहरूले पुस्तक पसले र कतिपय एजेन्टमार्फत चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । पुस्तक÷फोटोकपी पसलेहरू कमिसन लिन्छन् ।
नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय यसलाई गम्भीर लापरबाहि र गैरजिम्मेवार काम ठान्छन् । अध्यक्ष उपाध्यायले भने, “एउटै थेसिस, एउटै गाइड, त्यो पनि पटकपटक ! यो गम्भीर कुरा भयोे । एउटै थेसिस बुझाएर एउटै सुपरभाइजरमार्फत धेरै विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउनु पुरै विश्वविद्यालय र प्रोफेसरहरुको लज्जाको कुरा हो ।” उनले भने, “टिचरले यस्तो गर्छन् भन्ने म कल्पनै गर्न सक्दिन । यसो हो भने विश्वविद्यालयको गरिमा रहेन अब ।”
थेसिस चोरी नैतिक दृष्टिले मात्रै होइन कानूनी रूपमा समेत गम्भीर अपराध हो । विश्वका कतिपय विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले त ‘बौद्धिक चोरी’ थाहा पाउन ‘प्लेजरिजम डिटेक्सन सफ्टवेयर’ को प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूको चरम लापरवाही र हेलचेक्र्याइँ, विद्यार्थीमा हुर्किएको ’कापी पेस्ट’ मनोविज्ञान र पैसामुखी प्राध्यापकको अनैतिक तथा अविवेकी कामले यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । व्यवस्थित अभिलेखालय र वैज्ञानिक प्रणालीको अभावमा अनुसन्धानमूलक सिर्जना समेतमा चोरी मौलाएको छ । गम्भीर पक्ष यो हो कि– यसरी अर्काको सिर्जना चोरेर पास गरेकाहरू समाजमा प्राज्ञिक वा बौद्धिक व्यक्तिको परिचय बनाएर बसेका छन् ।